प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नैपर्ने केही प्रश्न - 761खबर.com
प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नैपर्ने केही प्रश्न
आफ्नै क्याबिनेटका सबैभन्दा प्रिय व्यक्तिबाट हुन लागिरहेको यति ठूलो लुटबारे प्रधानमन्त्रीलाई थाहै थिएन त ? केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा प्रचण्ड बहुमतको सरकार बनेको दुई वर्ष पूरा भएको छ । तर, यो सरकार गठन हुँदै गर्दा नेपाली जनतामा जुन आशा, भरोसा र विश्वास थियो, त्यो दुई वर्षको अन्तरालमै चकनाचुर भएको छ । सरकार एकपछि अर्को काण्ड र भ्रष्टाचारका शृंखलामा जेलिँदै गएको छ । विकास र समृद्धि खोक्रा नारामा सीमित भएका छन् । सरकारले जप्दै आएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा उल्टो साबित भएको छ । आज देश समृद्धिको उकालो चढ्नुको साटो ओरालो झर्दै छ । जनता सुखी होइन, दुःखी बन्दै गएका छन् । यस्तो स्थितिमा सरकारबाट जनतामा निराशा छर्ने कामसिवाय केही भएको छैन । देशमा भ्रष्टाचार किन मौलाइरहेको छ ? सरकार किन जनहितका मुद्दाबाट टाढिँदै छ ? सरकार कमाउने मात्र होइन, लुट्ने धन्दामा किन लिप्त छ रु सरकारले किन जनताका चित्कार सुनिरहेको छैन ? किन देशमा अराजकता मौलाइरहेको छ ? यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्न सबैभन्दा पहिले यसका आधारभूत कारणको खोजी गर्नु जरुरी छ । यस क्रममा हामीले सर्वप्रथम राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध कस्तो अवस्थामा बलियो र कस्तो अवस्थामा कमजोर हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ । राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हरेक निर्वाचनपछि बन्ने सरकारसँग जनताले धेरै आशा, भरोसा र विश्वास साँचेका देखिन्छन् । अब बन्ने नयाँ सरकारले हाम्रा लागि पक्कै केही राम्रो गर्छ । यसले देशमा सुशासन कायम गराउँछ । भ्रष्टाचार घटाउँछ । महँगी नियन्त्रण गर्छ । जनताका दैनिकीमा देखिने किसिमको परिवर्तन ल्याउँछ । देशमा विकास निर्माणलाई गति दिन्छ । पिछडिएका वर्ग, समुदाय र जनताको जीवनस्तर उकास्न भूमिका खेल्छ भन्ने आशा अनि भरोसा जनतामा हुन्छ । ०४६ को परिवर्तनपछि संविधान बन्यो र ०४८ मा आमनिर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । आमनिर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो । कोइराला पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बन्दा पनि जनतामा त्यस्तै आशा थियो । तर, कति चाँडो त्यो आशा निराशामा परिणत भयो, त्यसको कसैले अनुमानसम्म गर्न भ्याएनन् । दुई वर्षमा जे–जति काण्ड भए, तिनबारे प्रधानमन्त्रीलाई कत्ति पनि सुइँको थिएन, उहाँको जानकारीविनै यी सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भएका थिए भनेर नेपाली जनताले पत्याउने अवस्था छैन । साँच्चै थाहा थिएन भने उहाँले कस्तो प्रशासन चलाइरहनुभएको छ ? कोइराला नेतृत्वको बहुमतको सरकारको निराशाजनक कार्यशैली हिंसात्मक माओवादी द्वन्द्वको मलिलो आधार भूमि बन्न पुग्यो । कोइराला सरकारको तीन वर्ष पनि नबित्दै त्यो सरकारप्रति जनताका जे–जति आशा र भरोसा थिए, ती सबै निराशामा परिणत भए । निर्वाचनबाट वैधानिकता पाएको राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध छोटो समयमै धमिलियो । ओली सरकारले बढाएको निराशा कोइरालाको पालामा जस्तै वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठनपछिका दुई वर्ष निराशैनिराशामा बितेका छन् । जतिखेर ओलीजी झन्डैझन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यतिखेर उहाँमाथि जनताको असीम आशा र भरोसा थियो । निर्वाचनपछि वैधानिकता पाएको यो सरकारमार्फत नेपाली राज्य व्यवस्थाले आफ्नो हितमा काम गर्छ र आफ्ना आकांक्षा सफलीभूत हुन्छन् भन्ने जनताको विश्वास थियो । किनकि, त्यसअघि नाकाबन्दीको समयमा ओलीजी नेपाली स्वाधीनताको पक्षमा मोर्चा कसेर उभिनुभएको थियो । त्यसैले, उहाँको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि आफ्ना सपनामाथि कुठाराघात हुनेछैन भन्ने जनताको भरोसा थियो । उहाँको नेतृत्वमा राज्यशक्ति बलियो हुनेछ । राज्य र नेपाली जनताबीचको विश्वास र सुसम्बन्ध थप मजबुत हुनेछ । देश समृद्धिको पथमा लम्किनेछ । देशमा विकास निर्माणका अभियान दु्रत गतिमा अघि बढ्नेछन् र जनताले सुख पाउनेछन् भन्ने पूर्ण विश्वास जनतामा पलाएको थियो । तर, ओली सरकारको पछिल्लो दुई वर्षको कार्यकालसँगै त्यो विश्वास खलबलिएको छ । जनताले साँचेका विश्वासमाथि ओलीजीले दुई वर्षमै कुठाराघात गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने कि नसोध्ने ? पछिल्लो समयमा परिस्थिति थप बिग्रँदै गएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीजीले सबैभन्दा बढी विश्वास गरेका, नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा तुलामा एकातिर सबै नेता, कार्यकर्ता र अर्कातिर तत्कालीन सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई राख्दा उनी एक्लै बढी भारी हुने भन्दै प्रशंसा गरिएका उहाँका सबैभन्दा बढी विश्वासपात्र, सबैभन्दा बढी नजिकको व्यक्ति भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले नै दुई दिनअघि ढाड थपथपाएका व्यक्ति ठाडै नेपाली जनताको सम्पत्तिमाथि लुटपाट गर्न तम्सिएको देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । के आफ्नै किचेन क्याबिनेटका सबैभन्दा प्रिय व्यक्तिबाट हुन लागिरहेको यति ठूलो लुटको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई थाहै थिएन होला त ? के अर्बौंको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीको जानकारीविनै एकजना मन्त्रीको मात्र स्वविवेक र तजबिजमा अघि बढिरहेको थियो त रु निजी निवासमा बसाइएका आफ्ना सर्वप्रिय मन्त्रीले ७० करोड कमिसनको विषयमा बार्गेनिङ गरिरहेकोबारे प्रधानमन्त्री ओली साँच्चै अनभिज्ञ नै हुनुहुन्थ्यो त ? के स्वयं प्रधानमन्त्रीको सहयोग र सम्मतिविना यस्ता काण्डहरू भए होलान् त ? यी प्रश्न नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोध्न पाउनुपर्छ र सोध्नु पनि पर्छ । दुई वर्षअघिको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्दै गर्दा जनता एउटा बलियो र स्थिर सरकार पाएकोमा दंग थिए । नयाँ सरकार गठनसँगै नयाँ संविधानअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था थप बलियो हुँदै जान्छ भन्नेमा जनता विश्वस्त देखिन्थे । नयाँ सरकारको नेतृत्वमा आएका ओलीजीलाई असल चरित्रवान्, इमानदार, बोलीमा अडान भएका, अनुभवी र नेपाली राष्ट्रियताका संरक्षक नेताका रूपमा जनताले सत्तामा स्वागत गरेका थिए । उहाँको शासनकालमा नेपाली राज्यव्यवस्था र जनताबीचको सम्बन्ध नङ र मासुबीचको जस्तो अभिन्न हुने आमअपेक्षा थियो । तर, त्यो सबै आज सरकारकै गलत रबैयाका कारण धूलीसात् भएको छ । भ्रष्टाचारको विकराल स्थिति वर्तमान सरकार गठनयताका दुई वर्षमा वाइडबडी, बालुवाटार काण्ड, यती होल्डिंग्ससितको अपारदर्शी सम्बन्ध, नेपाल टेलिकमभित्रको लुट हुँदै पछिल्लो समयमा सेक्युरिटी पे्रेस खरिदसम्बन्धी प्रक्रियामा सरकारको बचेखुचेको इज्जत पनि सम्पूर्ण रूपमा पानीमा बगेको छ । सरकार जनताको नजरमा नांगिएको छ । त्यसैको पछिल्लो प्रतिबिम्ब मात्र हो– गोकुल बाँस्कोटा जोडिएको कमिसनको प्रसंग । यो दुई वर्षमा जे–जति काण्ड भए, तिनबारे प्रधानमन्त्रीलाई कत्ति पनि सुइँको थिएन, उहाँको जानकारीविनै यी सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भएका थिए भनेर नेपाली जनताले पत्याउने अवस्था छैन । साँच्चै प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता काण्डबारे थाहै थिएन भने उहाँले कस्तो प्रशासन चलाइरहनुभएको छ ? के जनताले यही प्रश्न सोधेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले छातीमा हात राखेर आफूलाई केही थाहा थिएन भन्न सक्नुहुन्छ ? थाहा थियो भने जनताले उहाँलाई अझै किन स्विकारिरहने ? प्रधानमन्त्री ओलीजीले राम्रा काम गरेर राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने जुन अवसर पाउनुभएको थियो, त्यसलाई गुमाउनुभएको छ । यसमा अरूलाई दोषी देखाएर उहाँ उम्किन पाउनुहुन्न । यहाँ प्रश्न गोकुल बाँस्कोटामा मात्र सीमित छैन । आज प्रेसमा नआएको भए ७० करोडको लेनदेनको प्रयास त भित्रभित्रै चली नै रहेको रहेछ नि १ त्यसबारे डेढ महिनाअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई खबर पनि भइसकेको रहेछ । आखिर ७० करोड कमिसनले समेत नपुगेर थप बार्गेनिङ सुरु गरेको हुनाले त यो लेनदेनको विषय बाहिर आएको हो । नत्र ७० करोडमै चित्त बुझाइदिएको भए त भित्रभित्रै सामसुम हुने रहेछ नि ? यसरी देशका कार्यकारी प्रमुखको चरित्र, नैतिकता र इमानबारे प्रश्न गर्ने स्थितिमा नेपाली जनता पुग्नु नै दुर्भाग्य हो । मौलाउँदो लुट जब राज्य नै लुट्ने मानसिकताबाट ग्रस्त हुन्छ, त्यहाँ विकास निर्माण हुन सक्दैन । हचुवाको भरमा ल्याइने कमजोर बजेट नभएको अवस्थामा मनपरी रूपमा लुट्न पाइँदैन । ठीकठीक तरिकाबाट ठीकठीक आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गराउने विषयमा नेतृत्वको चासो देखिन्न । नेपालमा हरेक वर्ष देशको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट असारमा मात्र खर्च हुन्छ । एकै दिनमा २६-२७ अर्ब खर्च भएको त महालेखाले नै बताइसकेको छ । ओली सरकारको पालामा पनि यस्तो अव्यवस्थामाथि कुनै परिवर्तन भएको छैन र अझै यसमा कुनै परिवर्तन हुँदैन पनि । किनकि, त्यसमा केही सुधार या परिवर्तन भयो भने देशमा आर्थिक अनुशासन आउँछ । अनि शासकहरूले मनपरी गर्न पाउँदैनन् । जुन शासकहरू बजेटलाई लुटको एउटा यन्त्र बनाउन कस्सिएका छन्, तिनले विकास चाहँदैनन् । बजेटमा पद्धति र विधिअनुसार परेका योजना समावेश गर्दैनन् । तिनले बजेटमा राम्रा योजना समावेश नै गर्दैनन् । किनकि, त्यस्तो योजना समयमै सकियो भने भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन । त्यसैले, हामीकहाँ जति पनि आर्थिक अनियमितता भइरहेको छ, त्यो सरकारले नियतवश नै गरिरहेको छ । यसमा सुधार नगरुन्जेल जनताका सपनामाथि जहिल्यै कुठाराघात भई नै रहनेछ । अबका सम्भावना सरकारको यस्तै लुटका कारण राज्य र जनताबीचको विश्वास टुट्दै गएको छ । यसरी राज्य र जनताबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा हुँदा राज्य बलियो भयो भने उसले आफ्ना विरोधीलाई सिध्याएर अधिनायकवाद ल्याउन सक्छ । तर, नेपालको भूराजनीतिक परिवेशका कारण पनि त्यो सम्भव देखिन्न । यस्तो अवस्थामा राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध टुट्दै गएपछि राज्य कमजोर हुँदै जान्छ । कमजोर राज्यले जनहितमा काम गर्न सक्दैन । जनतामा असन्तुष्टि बढेर जान्छ । र, देशमा अराजकता मौलाउँछ । यी दुईमध्ये पहिलो सम्भावनाका लागि पनि कोसिस त चलिरहेकै देखिन्छ । प्रेसको मुख थुन्न खोजिएकै छ । कानुन सरकारका पक्षमा बन्न थालेका छन् । मानवअधिकार आयोगलाई कमजोर पारिँदै छ । सत्य निरूपण आयोगले कामै गर्न सकेको छैन । विरोधी आवाजलाई दबाएरै जान सकिन्छ कि भन्ने कोसिस नभएको होइन । तर, नेपाली जनताले पटक–पटक संघर्ष गरेर ल्याएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रता उहाँहरूले चाहेर पनि रोक्न, थुन्न या बन्द गर्न सक्नुहुन्न । त्यसैले, अबका दिनमा पनि उहाँहरू नसुध्रिने हो भने राज्य र जनताको सम्बन्ध थप बिग्रन्छ । देशमा अराजकताको स्थिति आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष विदेशी हस्तक्षेप बढेर जान्छ । तर, नेपाली प्रेसले संकटको घडीमा जहिल्यै जनतालाई साथ दिएको छ । सरकारका हरेकजसो काण्डलाई एकपछि अर्को गर्दै बाहिर ल्याइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यो देशमा अझै पनि कसैको मनपरी चल्न त्यति सजिलो भने छैन । प्रधानमन्त्री ओलीजीले राम्रा काम गरेर राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने जुन अवसर पाउनुभएको थियो, त्यसलाई गुमाउनुभएको छ । यसमा अरू कसैको होइन, दोष उहाँकै छ । किनकि, नेतृत्व उहाँकै छ । उहाँ अरूलाई दोषी देखाएर उम्किन पाउनुहुन्न । यहाँ प्रश्न गोकुल बाँस्कोटामा मात्र सीमित छैन, यो भ्रष्टाचारको शृंखलामा स्वयं प्रधानमन्त्रीको संलग्नता(आशीर्वाद त छैन ? यस विषयमा अब संसद्ले छानबिन गर्नुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्मा यति छानबिन पनि गराउन नसक्ने हो भने उसको पनि औचित्य रहँदैन । उसका सांसदले घरमै बसेर खुरुखुरु तलब बुझे हुन्छ । (डा लोहनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तका अध्यक्ष हुन्)